MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 926
Mae Sot Thar - Karen State Authority to arrest unlicensed vehicles at the border
ကာတွန်း - အော်ပီကျယ် - အစီရင်ခံစာထွက်လာမှာ ဆက်လုပ်တာပေါ့
>Kye Thee (Thee Lay Thee) - Poem for my Father
>Burmese movie filmed in Switzerland
>US Congress say Pizza is vegetable
>ိုံင်ငံရေးအကဵဉ်းသားဟောင်း ဒေၞခင်မာအေး ရက်လည်ဆမြ်းသတ်ြမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဧူပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ၁၉၆၀ ကေဵာင်းသားအရေးအခင်းကတည်းကူမန်မာ့အရေးဆောင်ရက်ြသိူိုံင်ငံရေးအကဵဉ်းသားဟောင်း ဒေၞခင်မာအေး၊ ၆၈ိံစြ် ဧူပီ ၁၁ မြာ ကယ်ြလန်ြခဲူ့ပီး...
>စကဿာပူရောက်ူမန်မာတေရြဲႚ လတ်ြလပ်မရြေခဵိန်
> စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေရဲ့ လွတ်လပ်မှု ရေချိန်(မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများကို စင်္ကာပူအစိုးရက ဗီဇာတိုးမပေးဘဲ ကြန့်ကြာထား)မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃၊ မောင်မောင်စလုံးဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ဧပြီလဆန်းမှာ သီးလေးသီးအဖွဲ့ လာရောက်လည်ပတ်မယ့် ဧည့်သည်ဗီဇာကို အဖွဲ့သားအားလုံးအား ထုတ်ပေးရန်...
>ူပည်ပရောက်ူမန်မာတခြိႚ သံရုံးမြာ ကန်ႚကက်ြမဲထည့်
> ပြည်ပရောက် မြန်မာတချို့ သံရုံးမှာ ကန့်ကွက်မဲ ထည့် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ထိုင်းနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံများတွင် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ အများအပြားရှိသည့်တိုင် ဆန္ဒမဲပေးသည့်...
>စစ်အစိုးရိံငြ့်မပူးပေၝင်းရန် မဵြိးဆက်သစ်လူငယ် တိုက်တနြ်း
> အိုံပညာရင်ြမဵား စစ်အစိုးရိံငြ့်မပူးပေၝင်းရန် မဵြိးဆက်သစ်လူငယ် တိုက်တနြ်းဘီဘီစီ ဧ္ဘပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ အက်ဆစ် တေးဂီတအဖြဲႚမြ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် အဆိုတော် ဇေယဵာသော်ဟ္ဘာပီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝၝရီလတုန်းက အဖမ်းခံရ္ဘပီးတော့ အင်းစိန်ထောင်မြာ ခဵပြ်ြေိာံင်ခံနေရတဲ့အေုကာင်း သူငယ်ခဵင်ူးဖစ်တဲ့...
>ခင်မာအေး –ိံစြ် ၅၀ူပည့် ဝေဒနာ
> နှစ် ၅၀ ပြည့် ဝေဒနာဒေါ်ခင်မာအေး (၁၉၄၀ – ၂၀၀၈)ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ မောင်ရေ …လူ့ဘ၀မှာ အနေကြာနှစ် ၅၀ များတောင် ပြည့်ခဲ့ပေါ့ခက်ထန်ကြမ်းတဲ့ နှစ်များမှာခါးသက်တဲ့ ဝေဒနာဟာမေ့မှာ စွဲကပ်လို့...
> မိုးမခ ၅ နှစ် ကောင်းမှု မောင်ရစ်ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ နိဒါန်း အို … ဘယ့်နှယ့် နာရေးတွေနဲ့ မောင်ရစ် တယောက်ဖိစီးပြီး “သွားရှာပြန်ပြီပေါ့ … မိုးမခ” လို့...
>သုကဿန်တငြ် မောင်ရစ်ေုကာင်ရေခဵြိူးခင်း
> ကာတွန်း မောင်ရစ် – သင်္ကြန်တွင် မောင်ရစ် ကြောင်ရေချိုးခြင်းဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၀၈(၁၉၉၀ ခုနှစ်များက ကာတွန်းအဟောင်း၊ ဘယ်မှာမှ မပါသေးတော့ အသစ်ပေါ့၊ အဟိ) No tags for this...
> ရိုးရာသဋ္ဌကဿန်ိံငြ့် ရိုးရာမုန်ႚ ဓာတ်ပုံသတင်းဧ္ဘပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ိံစ်ြသစ်ကူးသဋ္ဌကဿန်ကာလတငြ် မုန်ႚလုံးရေပေၞ လုံးနေသော ထိုင်ိးုိံင်ငံ မဲဆောက်္ဘမြိႚရောက်ူမန်မာူပည်သားအခဵြိႚ။ (ဓာတ်ပုံ-မိုးမခ) No tags for this post. Related...
>လတြ်ေူမာက်နေသူ ယာဉ်မောင်း ကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံ
> လူ၅၀ကေဵာ်သေဆုံးမတြငြ် လတြ်ေူမာက်နေသူ ယာဉ်မောင်း ကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံဓာတ်ပုံသတင်းဧ္ဘပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ မုကာသေးမီက ထိုင်ိးုိံင်ငံရောက်ူမန်မာူပည်သား ၅၀ ကေဵာ်သေဆုံးခဲ့သော အမတြငြ် ထကြ်ေူပးလတြ်ေူမာက်သြားသော ထရပ်ကားမောင်းသူက ထိုင်းရဲတပ်ဖြဲႚသိုႚ သြားရောက်အဖမ်းခံခဲ့သည်။ ကားမောင်းသူ Suchon...
>ထောက်ခံမဲအတကြ် မဲဆယ်ြနေတဲ့ စစ်အစိုးရမီဒီယာမဵား
> ထောက်ခံမဲအတကြ် မဲဆယ်ြနေတဲ့ စစ်အစိုးရမီဒီယာမဵားဓာတ်ပုံသတင်းဧူပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကန်ႚကက်ြမဲထည့်ုကဖိုႚ အတိုက်အခံကေုကညာခဵက်တြေ ထက်ြလာူပီး စစ်အစိုးရကဖက်လည်း ထောက်ခံမဲအတကြ် အရြိန်ူမငြ့်စည်းရုံးနေပၝတယ်။ ရုပ်ူမင်သုံကားပေၞက စာတေကြိုကည့်ပၝ။ ရပ်ကက်ြထဲမြာကတော့ ထောက်ခံမဲထည့်မြ မီးမန်ြမန်ြလာမည်လိုႚ...
>တရုတ်အိုလံပစ်အောင်ပြဲသည် အာဏာရင်ြတိုႚ အောင်ပြဲ
> တရုတ်အိုလံပစ်အောင်ပွဲသည် အာဏာရှင်တို့်အောင်ပွဲမိုးမခ ၀င်းဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့အုပ်ချူပ်ချင်သလိုအုပ်ချူပ်ရုံမက သတ်ဖြတ်ချင်သလို သတ်ဖြတ၊် ဖမ်းဆီးမူတွေကိုလည်း ဥပဒေမဲ့လုပ်နေတာနဲ့ အားမရသေးဘူး၊ သူတို့ကျင်းပတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုလည်း ပြည်သူလူထုကို အားပေးခိုင်းနေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးမှာလား၊...
>၀င်းပေၞမောင် – ဒိုင်နဲႚ ထိုးသား
> အရင် ဒိုင်, အခု ထိုးသားဝင်းပေါ်မောင်ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲသည် အနှစ်သာရအားဖြင့် စစ်အစိုးရ ဖြုတ်ချရေး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒပေးပွဲ အဖြစ်သို့ တရွေ့ရွေ့ အသွင်ပြောင်းလာနေပြီ...
>မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ – ဧူပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈
> မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီဧူပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈က၀ိအဆူဆူ ပၝတော်မူပီ – လူထုဒေၞအမာ၊ေုကးမုံဦးသောင်း ကယ်ြလနြ်ူခင်းသတင်းတိုထြာ၊ သီခဵင်းပဒေသာဆိံ္ဋခံယူပြဲ သတင်းစုစည်းတင်ူပခဵက်နဲႚ ကန်ႚကက်ြမဲတေးမဵားတိုင်ူးပည်ခဵစ်တဲ့ ဗိုလ်ခဵပြ်ုကီးမဵား – လူထုဦးလြ၊ နေလင်း...
>New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote "YES" or else !!!
> New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote “YES” or else !!!April 14, 2008 No...
>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs
> ပြန်လည်ဆန်းသစ်လိုက်ချင်တဲ့ဇာဂနာနဲ့ မြပုဏ္ဏမာအဖွဲ့သားများရဲ့ ၂၀၀၀ သင်္ကြန်သီချင်းများမိုးမခဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ပြည့်တုန်းက ဇာဂနာတို့အဖွဲ့ တင်ဆက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ သင်္ကြန်သီချင်းများ အစီအစဉ်ကို လူထုရှေ့စင်မြင့်ပေါ် တက်ခွင့်မရတဲ့ ဇာဂနာ့ ကိုယ်စား...
>The Passing of Daw Khin Mar Aye, 68 in Rangoon, Burma (11st April, 2008)
> ဒေါ်ခင်မာအေး၊ ၆၈ နှစ် ဈာပနဓာတ်ပုံသတင်းဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
>ူမန်မာူပည်သားမဵားပေးသည့်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ဇာဂနာရရိဓြာတ်ပုံသတင်းဧ္ဘပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လန်ဒန်္ဘမြိႚ သာသနရံသီ ၀ိဟာရဘုန်းတော်ဋ္ဌကီးကေဵာင်း၊ လန်ဒန်္ဘမြိႚူမန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ The Nox တေးဂီတအဖြဲႚတိုႚက စယ်ြစုံရ အိုံပညာရငြ် ဇာဂနာအား လတ်ြလပ်သည့်အနုပညာရင်ြဆုကို ခဵီူးမငြ့်လိုက်သည်။ ဧ္ဘပီ ၁၂...
> လေ့လာကဋ္ဋမ်းကဵင်သူ အကဲခတ်မဵား၏ တေဝြေယိမ်းယိုင်မတြူမောင်ညြိဧူပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လာမည့် မေလ ၁၀ ရက်နေႚတငြ်ူပည်လုံးကဋ္ဋတ်ဆိံ္ဋခံယူပြဲ ကဵင်းပပေးမည်ဟု (နအဖ) စစ်အစိုးရ၏ူပည်လုံးကဋ္ဋတ်ဆိံ္ဋခံယူပြဲ ကဵင်းပရေးကော်မရင်ြက ဧူပီလ ၉ ရက်နေႚက...
> ကယ်ြလန်ြသူ ဒေၞခင်မာအေး(၆၈ိံစြ်)၏ ကိုယ်ရေးအကဵဉ်း ၀ၝရင့်ိုိံင်ငံရေးသမားမဵား စီစဉ်ကဵင်းပသည့် ၂၀၀၃ ခိုံစြ် အမဵြိးသားအောင်ပဲနြေႚ အခမ်းအနားတငြ် တြေႚရသော ဒေၞခင်မာအေး။ ရြေႚဆုံးတန်းမြ ဒေၞခင်မာအေး၊ သခင်အုန်ူးမင့်၊ သခင်သိမ်းမောင်၊ ဒေၞူမင့်ူမင့်ခင်၊ သခင်စိုးမင့်။...
>စကားလက်ဆုံ – အေသိန်း၊ အောင်ဝေး နဲႚ ကမ်ုးကည့်ငကြ်
> မိုးမခနဲ့ စကားလက်ဆုံအေသိန်း၊ ကဗျာဆရာ အောင်ဝေး နဲ့ ကမ်းကြည့် ငှက်လွတ်မြောက်ရေးခရီးသည်တို့ မိုင် ၁၀၀၀ ကျော် ခရီးပေါက်ခဲ့ပြီမိုးမခဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ပြည်တွင်း ပြည်ပရောက် မြန်မာအများစုက ၁၃၇၀ ပြည့်...
> ဒီကိုကည့်ဓာတ်ပုံသတင်းဧ္ဘပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ္ဘပီ ၁၁ ရက်နေႚကူမန်မာ့ရိုးရာ သဋ္ဌကဿန်ပဲတြော်တငြ် ပေဵာ်ူမြးနေသော ရန်ကုန်သားလူငယ်တစ်ဦး။ ဆံပင်ကို ဆေးရောင်စုံဆိုးထား္ဘပီး ထူးခားသည့်ပုံစူံပြူပင်ထားသည့် အဆိုပၝလူငယ်က လြဵာအောက်တင်ြလည်း သံကငြ်းအပိုင်းအစ (piercing) တပ်ဆင်ထားသည်။(ဓာတ်ပုံ-အေအက်ဖ်ပီ...
>ထိုင်ိးုိံင်ငံတငြ် ဖမ်းဆီးခံထားရသောူမန်မာအလုပ်သမားမဵား
> ထိုင်ိးုိံင်ငံတငြ် ဖမ်းဆီးခံထားရသောူမန်မာအလုပ်သမားမဵားဓာတ်ပုံသတင်းဧ္ဘပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ္ဘပီ ၁၁ ရက်နေႚက ထိုင်ိးုိံင်ငံ၊ ရနောင်း္ဘမြိႚ တရားရုံးတစ်ခုသိုႚ ရောက်ရိလြာသောူမန်မာူပည်သား အလုပ်သမားမဵား။ အဆိုပၝအလုပ်သမားမဵားသည် လေအေးစက်ပဵက်သူဖင့် လူ ၅၄...
> ရေဝြၝရောင်သံဃာတော်မဵာိးံငြ့် အမေရိကန်အမတ်မဵားတြေႚဆုံ ဓာတ်ပုံသတင်း ဧူပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈၊ ဧူပီ ၁၀ ရက်နေႛက၊ ဆီနိတ်တာ မစ်ခဵ် မက္ကောနိာံငြ့် ရေဝြၝရောင်သံဃာ ၂ ပၝးတိုႚတိုႚ ၀ၝရင်ြတော်လတ်ြတော်ရုံးခမ်းတငြ်...
Page 926 of 948«1...924925926927928...948»